I-Tronsmart Studio Wireless Somlomo, ukuhlaziywa nokusebenza | Izindaba zegajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | 02/11/2021 20:00 | General
Sikulethela isibuyekezo esisha lapho umsindo nomculo yizona ezidlala indima enkulu. Isibuyekezo lapho I-TronsmartUyaphinda futhi, uyeza ezosilethela umkhiqizo azowungeza kukhathalogi yakhe ebanzi. Namuhla sethula i I-Tronsmart Studio Wireless Somlomo, isipikha esinamandla nesihlangene esinokuningi esingakunikeza.
Uma ungomunye walabo abathanda umculo ngevolumu egcwele. Uma futhi unganelisekile ngomsindo owamukelekayo. Futhi uma kubalulekile kuwe ukuthi ukuzimela kwesipikha sakho kukwazi ukuhambisana nawe, i-Tronsmart Studio ingaba yileso sipikha osifunayo.
1 I-Tronsmart Studio Wireless Somlomo, lokho nje okudingayo
2 Idizayini yesipikha esingenantambo se-Tronsmart Studio
3 Ubuchwepheshe besimanje nge-Tronsmart Studio
4 Imininingwane yetafula
5 Izinzuzo Nezingozi Zesikhulumi se-Tronsmart Studio
I-Tronsmart Studio Wireless Somlomo, lokho nje okudingayo
Sikwazile ukuhlola kuGajethi ye-Actualidad inani elikhulu lezipikha nezinsiza ezihlobene nomsindo. Nakanjani, isikhulumi se-bluetooth iyisesekeli kuhle ukujabulela umculo wethu intandokazi ngendlela ekhululekile kakhulu. Xhuma i-smartphone yethu, khetha uhlu lwadlalwayo olufanele, futhi yilokho.
Kodwa akuzona zonke izikhulumi ezinikeza izinga elinjalo ikhwalithi yomsindo namandla kusayizi ohlangene kanye nefomethi. Isikhala sibalulekile ekhaya, kodwa ukuphatheka kahle kuyabhekelelwa nalabo abathanda ukuthatha umculo wabo noma yikuphi lapho beya khona futhi bawuzwakale ngendlela esiwuthanda ngayo.
I-Tronsmart Studio Wireless Speaker iwina izinombolo eziphelele ngenxa yemakethe ibhalansi enkulu ezuziwe phakathi kwentengo yayo nazo zonke izinzuzo lokho okunikezwayo. Uma ufuna isikhulumi sehhovisi lakho, ikhaya lakho noma ukwenza isipho esiphelele, ngenxa yezizathu eziningi lokhu kuba inketho enconywa kakhulu. Lapha ungakwazi ukuthenga manje I-Tronsmart Studio ngaphansi kokucabanga kwakho.
Idizayini yesipikha esingenantambo se-Tronsmart Studio
Kuyiqiniso ukuthi kukhona izikhulumi emakethe lapho umklamo udonsa amehlo iso lenyama. Izipikha zidale okuningi njengezinto zokuhlobisa kunamadivayisi asebenzayo wezobuchwepheshe. I-Tronsmart Studio Wireless Speaker is isipikha esifana nelawudispikha ngempela, futhi ngaphezu kwakho konke, kuzwakala njengesikhulumi sangempela.
Sithole i- umklamo wakudala onesimo esingunxande, imigqa eqondile nombala omnyama. Isipikha esine ifomethi yedeskithophu ezongena kahle kunoma iyiphi indawo. Futhi lokho kusikhumbuza izikhulumi ze-studio zakudala kodwa ngokuthinta okuncane kwesimanje ngenxa yombala omnyama nezinto ezisetshenziselwa ukwakhiwa kwayo.
Ine- i-aluminium chassis eqinile ukuthi, ngaphezu kokukunikeza isithombe esihle, senza akukho ukulahlekelwa ngokwethembeka okuphezulu. Into eyenza ukulalela kwanelise ngempela.
Yibambe I-Tronsmart Studio ku-Amazon ngentengo engcono kakhulu
Ku phezulu sithole ifayela le- ukulawula inkinobho kuphaneli yenjoloba egxile ngokuphelele. Sinenkinobho amandla, ukuphakamisa nokwehlisa ivolumu Yokukhiqiza kabusha, dlala / misa isikhashana. Kukhona futhi inkinobho for the isixhumanisi nge-bluetooth nge-smartphone noma ikhompuyutha yethu. Futhi ezinye izinkinobho ezimbalwa ezizokwenza, eyodwa ukuze sicele yethu umsizi wezwi, nenye ukwenza kusebenze i Ubuchwepheshe be-Sound Pulse esizokhuluma ngalo ngokulandelayo.
Ku phansi sayithola isisekelo sokusekela futhi esenziwe ngerabha. Idivayisi ihlezi kuyo ngokuphelele, ihlale iphakeme kancane ngendlela enhle kakhulu. Le rabha futhi isebenza njenge-anti-slip. Futhi ngaphezu kwakho konke ukugwema ukudlidliza okungenzeka ukuthintana netafula lapho sisebenzisa ivolumu ephezulu.
Ku ngemuva sithole ifayela le- ukulayisha imbobo, ngefomethi Uhlobo C lwe-USB, esekela ukushaja okusheshayo. Futhi a Ukufaka okungu-3,5mm jack ukuxhuma enye idivayisi ngaphandle kwe-bluetooth. Futhi eyodwa Isikhala sekhadi lememori ye-Micro SD lapho singangeza khona wonke umculo esiwufunayo, nokuwudlala ngaphandle kwebluetooth noma izintambo.
Ubuchwepheshe besimanje nge-Tronsmart Studio
Uma sicabanga ngokuthenga isipikha, amandla esikwazi ukuwanikeza abaluleke kakhulu, futhi ngokuvamile kungenye yezinto esizibheka kuqala. Kodwa la mandla avame ukungqubuzana nekhwalithi yomsindo. Kungakho kubalulekile ukwazi ukuthi iTronsmart isebenze ngobuqotho ukuze lesi sikhulumi esincane sikwazi ukunikeza amandla angekho ngaphansi kuka-30 W nokuthi zizwakala nge-a izinga amazing ngempela.
Okukhethekile Ubuchwepheshe be-Sound Pulse Iklanyelwe ukuthuthukisa umuzwa wokulalela. Inikeza a okukhipha umsindo okungahlanekezeli kungakhathaliseki umthamo. I-Tronsmart Studio nayo ingeyokuqala enkampanini ukwethula i- Ubuchwepheshe be-TuneConn, ngenxa yalokho singaxhuma ngesikhathi esisodwa izipikha ezingafika kweziyi-100 ngokungenantambo kudivayisi eyodwa… uyahlanya. Manje ungathenga eyakho I-Tronsmart Studio ku-Amazon ngokuthunyelwa kwamahhala.
El umsindo oguqukayo onamashaneli angu-2.1 akunakwa. Siyabonga ku uhlelo lokusebenza lwe-tronsmart ungakwazi ukufinyelela ezahlukene izilungiselelo, ukwenza ngokwezifiso, ukulinganisa kanye nayo yonke imithelela yomsindo ongayicabanga. Isipiliyoni sokusebenzisa izinzuzo zohlelo lokusebenza ngekhwalithi nomsindo useduze nalokho obukade ukukufuna.
Umthuthukisi: Inkampani Geekbuy Inc.
La ukuzimela futhi kuyiphuzu eliqinile likaSomlomo weStudio Wirells. Ngiyabonga kweyakho amabhethri amabili angu-2000 mAh uyakwazi ukubamba kufika emahoreni angu-15 wokudlala okungaphazamiseki. Amabhethri ngenxa yobuchwepheshe bokushaja ngokushesha angaba ngu-100% emahoreni amathathu nje.
Iphinde igqamise i engenamanzi ubonge ku Ukuqinisekiswa kwe-IPX4. Nakuba i-priori yokuklama nokuma kwayo ingabhekwa njengesikhulumi sangaphakathi. Izinto zayo kanye nokumelana kwazo kwenza kube inketho enhle kakhulu yokusetshenziswa ngaphandle.
Isipikha se-Tronsmart Studio sifakwe 1 i-low-frequency center subwoofer, Izipikha ezi-4 zokwenziwa ukuhlinzeka ngama-bass ajulile namandla, futhi 2 ama-tweeter aphezulu. Izikhulumi ezimbalwa emakethe ezihamba kuleli banga lentengo zizokwazi ukunikeza noma yini efana nayo.
I-Modelo Studio Wireless Somlomo
Conectividad I-Bluetooth 5.0 + 3.5 + Ijekhi ye-Micro SD
Ibanga lemvamisa I-20 Hz - 20000 Hz
Ibhetri 2 x 2000mAh
Ukuzimela kuze kufike kumahora we-15
Isikhathi sokushaja 3 - 3.5 amahora
Ubukhulu X x 206.5 70 58 mm
Isisindo 0.961 kg
Ukuthenga Isixhumanisi I-Tronsmart Studio
Intengo 79.99 €
Izinzuzo Nezingozi Zesikhulumi se-Tronsmart Studio
Ubuchwepheshe be-TuneConn ukuxhuma izipikha ezingafika ku-100 kudivayisi eyodwa.
Amandla we-30W emshinini ohlangene onjalo.
Ukuzimela kwamahora angama-15 ngecala elilodwa.
Ikhwalithi yomsindo akukho ukuhlanekezela kunoma iyiphi ivolumu.
I-Tule Conn Technology
El insimbi chassis ingase igogeke noma ikhubazeke ngokuwa.
Isisindo esiphakeme de cishe 1 kg
I-Tronsmart Studio Wireless Somlomo
Kuthunyelwe ku: Novemba 2 we-2021
Ukulungiswa kokugcina: Novemba 2 we-2021
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Tronsmart Studio Wireless Somlomo, ukuhlaziywa nokusebenza